गोल्छा समूहले अब नेपालमै मोटरसाइकलको पार्ट्स बनाउने, एसेम्बल उद्योगमा १५ प्रतिशतसम्म नेपाली उत्पादन ! « Artha Path
लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्षमा शर्मा र उपाध्यक्षमा बोहरा चयन
एमालेलाई लाग्यो वडा अधिवेशन, आज नुवाकोटमा पनि ८८ ओटै वडामा…
मुक्तिनाथ विकास बैंक “ग्लोबल एसएमई अवार्ड २०२१” बाट सम्मानित
शुक्रबार थप ७०८ जनामा कोरोना संक्रमण, ११ जनाको मृत्यु
बेमौसमी वर्षाका कारण ७ अर्बको धानबाली क्षति, लुम्बिनीमा मात्रै ४…
एमालेलाई लाग्यो महाधिवेशन, शनिवार देशभरका ६ हजार भन्दा बढि वडामा…
गोल्छा समूहले अब नेपालमै मोटरसाइकलको पार्ट्स बनाउने, एसेम्बल उद्योगमा १५ प्रतिशतसम्म नेपाली उत्पादन !
प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७८, बुधबार
काठमाडौं । नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय मोटरसाइकल ब्राण्ड बजाजले अबको एक वर्षभित्र १० देखि १५ प्रतिशत नेपाली उत्पादनको उपयोग गर्ने बताएको छ । नेपालमा हुलास अटोक्राफ्टले बजाज मोटरसाइकल एसेम्बल गरेर बेचिरहेको छ । यो गोल्छा समूह अन्तरगतको कम्पनी हो ।
गोल्छा समूहका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘आजको दिनमा एसेम्बल उद्योगमा नेपाली केही पनि उत्पादन प्रयोग हुँदैन । तर अबको एक वर्षमा १० देखि १५ प्रतिशत नेपाली कच्चापदार्थ प्रयोग गर्छौं ।’ यसो गर्न सकियो भने केही हदसम्म मोटरसाइकलको मूल्य घटाउन सकिने उनले जानकारी दिए ।
हुलास अटोक्राफ्टले नवलपरासीको रामग्राममा एसेम्बल उद्योग स्थापना गरेर पछिल्लो दुई वर्षयता एकै सिफ्टमा ३०० मोटरसाइकलको एसेम्बल गरिरहेको छ । यो देशकै सबैभन्दा ठूलो एसेम्बल उद्योग हो ।
यसअघि हुलास मोटर्सले मुस्ताङ म्याक्स नामकाे ब्राण्डमा गाडी उत्पादन गरे पनि उक्त उद्योग चल्न नसकेपछि विगत २ वर्षअघि बन्द भयो । अब हाललाई सबैभन्दा ठूलो अटो उद्योग नै बजाजको मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने हुलास अटोक्राफ्ट हो ।
सरकारले यो वर्षको संशोधित बजेटमार्फत् मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई थप राजश्व छुट दिएपछि यसबाट बचेको पैसा मोटरसाइकलका स्पेयर पार्टस बनाउने उद्योगमा खर्च गर्ने गोल्छाले बताए । उनले तत्कालै नेपालमा ‘प्लास्टिक मोल्डिङ’ का सामान उत्पादन गर्न सकिने जानकारी दिए ।
मोटरसाइकलमा धेरै पार्ट्सहरु प्लास्टिकबाट बनेका हुन्छन् । ती चीज आफ्नो मुलुकभित्रै बनाउन सकिने गोल्छाले बताए । ‘त्यसबाट देशभित्रै कच्चापदार्थ उत्पादन गर्नका लागि हामीले पहिले नै समझदारी (एमओयू) गरिसकेका थियौं । अब हामी त्यसमा लगानी गर्छौं,’ उनले भने ।
गोल्छाका अनुसार प्लास्टिकका पार्टसबाहेक स्ट्याण्ड, डबल स्ट्याण्ड, लेगार्ड, साडीगार्डजस्ता फलामका वस्तु पनि नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । मोटरसाइकलमा थुप्रै तारहरुको प्रयोग हुने भएकाले ‘वायर हार्नेसिङ’ लगायतका वस्तुको उत्पादन पनि नेपालभित्रै हुन सक्ने उनी बताउँछन् । सीट (बस्ने ठाउँ) पनि स्वदेशमै बनाउन सकिने उनको बुझाइ छ ।
चेसीस वेल्डिङजस्ता विशिष्ट काम चाहीँ अहिलेको अवस्थामा नेपालमा गर्न सकिन्न । तर बंगलादेशमा यी काम पनि सुरु भइसकेको छ । ‘फलाम नै ल्याएर रोबोटिक प्रविधीबाट वेल्डिङ गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामी विस्तारै यो काम पनि नेपालमै गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ।’
इञ्जिन नै एसेम्बल गर्न चाहीँ गाह्रो छ । इञ्जिन बनाउन निकै ठूलो लगानी चाहिने र हाम्रो बजारले त्यो स्तरको लगानी धान्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
यद्यपि, ‘एयर फिल्टर’ लगायतका इञ्जिनका अन्य पार्ट्स भने देशभित्र बनाउन सकिने गोल्छा बताउँछन् । उनले भने, ‘मलाई लाग्छ, सरकारले यो सहुलियत दिइराख्यो भने ३०–४० प्रतिशत कच्चापदार्थ नेपालभित्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ गोल्छाले सरकारी सहुलियत प्राप्त भइराखे आफ्नो एसेम्बल उद्योगमा मात्र ४ देखि ५ हजार जनालाई रोजगारी दिन सक्ने बताए ।
‘राजश्व र नाफामात्रै हेर्ने र संकुचित मानसिकता राख्ने हो भने यो देश यसरी नै थप ब्यापार निर्भर बन्दै जान्छ’, गाेल्छा भन्छन्, ‘उत्पादनमुलक अर्थतन्त्र बनाउने हो भने हामीले ठूलो सोच राख्नु जरुरी छ ।’
गोल्छाको उद्योगले अहिले नेपालभित्र विक्री हुने बजाजका मोटरसाइकलमध्ये ९० प्रतिशत मोटरसाइकल एसेम्बल गर्छ । एनएस, पल्सर, डिस्कभर लगायतका २२० सीसीसम्मका मोटरसाइकल नेपालमै बन्छन् । योभन्दा ठूलो क्षमताका मोटरसाइकल चाहीँ भारतमै बनेर आयात हुन्छ । बजाजसँगै टीभीएस कम्पनीले पनि नेपालमै मोटरसाइकल एसेम्बल गरेर बेच्छ ।
तर नयाँ बजेटले अरु ठूला कम्पनीलाई पनि नेपालमा एसेम्बल उद्योग राख्न दबाब परेको छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार नयाँ एसेम्बल उद्योग राख्न कम्तिमा वार्षिक २५–३० हजार मोटरसाइकल विक्री हुनु पर्छ । एसेम्बल उद्योगमा १ अर्ब ५० करोडजतिको लगानी हुने गोल्छा बताउँछन् ।
परीक्षण (टेस्टिङ)का लागि पनि ७–१० करोड लगानी गरेर उपकरण जडान गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । मोटरसाइकलको ब्रेकदेखि इन्धन खपत, आउटपुटसम्मका सबै परीक्षणहरु गर्नुपर्छ ।
‘यति ठूलो लगानी गर्न २५–३० हजार मोटरसाइकलको बजार सुनिश्चित हुनै पर्छ’, उनी भन्छन् । नेपालमा अहिले यामाहा, होण्डा, हिरो र सुजुकीले पनि मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग राख्न सक्ने गोल्छा बताउँछन् ।
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको अध्यक्षमा प्रकाशराज शर्मा निर्विरोध चयन भएका छन् । हिजो
बेमौसमी वर्षाका कारण ७ अर्बको धानबाली क्षति, लुम्बिनीमा मात्रै ४ अर्ब ५१ करोड
काठमाडौँ । बेमौसमी वर्षका कारण ७ अर्ब भन्दा बढिको धानबाली नष्ट भएको छ । केही
एमालेलाई लाग्यो महाधिवेशन, शनिवार देशभरका ६ हजार भन्दा बढि वडामा वडा अधिवेशन हुँदै
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको वडा अधिवेशन आज शनिवार हुने भएको छ । केन्द्रको निर्देशन अनुसार
महिला लघुवित्तको लाभांश संशोधन, बोनश र नगद कति ?
काठमाडौँ । महिला लघुवित्तको लाभांश संशोधन भएको छ । आज बिहान बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले
शाखा सञ्जालका आधारमा २७ वाणिज्य बैंकमध्ये कुन बैंक
बैंक कति चाहिन्छ अध्ययन हुँदैछ, लघुवित्त १०/१५ ओटामा
ग्लोबल आइएमई बैंकको १३.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा